Shiinaha iyo Ruushka oo saxiixay heshiis - BBC Somali - Ganacsi
Shiinaha iyo Ruushka oo saxiixay heshiis
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 24 Maarso, 2013, 21:39 GMT 00:39 SGA
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jingping iyo xaaskiisa Pen Liyuan ayaa booqasho ku maraya Ruushka iyo Afrika.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping, iyo madaxweynaha Ruushka Vladamir Putin ayaa ku heshiiyay in la saddex jibaaro shidaalka uu Ruushka ka iibiyo Shiinaha. Shidaalka ayaa gaari doona ilaa konton milyan oo ton sanadkii.
Heshiiska ayaa la saxiixay, iyadoo madaxweynaha cusub ee Shiinaha uu booqashadiisii ugu horaysay kun tagay Ruushka.
Labada hogaamiye ayaa sidoo kale saxiixay heshiis hordhac ah, oo Ruushka uu Shiinaha gaas kaga iibin doono sanadka 2018.
Madaxweyne Xi Jingping ayaa u safri doono Axada bari Afrika.